Ch 8 Ọrụ – 2azụ
Home / Bible / Ọrụ nke Ndịozi / Ch 8 Ọrụ
Ọrụ nke Ndịozi 8
8:1 N'ụbọchị ndị, e mere a oké mkpagbu megide Church na Jerusalem. Na ha niile nọ na chụgara ofụri n'ógbè Judia na Sameria, ma e wezụga ndịozi.
8:2 Ma Chineke na-atụ egwu mere ndokwa maka Stephen si olili ozu, na ha mere oké iru újú n'ihi ya.
8:3 Mgbe Sọl na-ebikwasị n'efu ka Church site na itinye ofụri ụlọ, na-adọkpụpụta pụọ ​​ikom na ndị inyom, na-akwa ha n'ụlọ mkpọrọ.
8:4 Ya mere, ndị ahụ a chụgara na-aga gburugburu, izisa ozi ọma nke Okwu Chineke.
8:5 Ma Filip, -agbadata ka otù obodo nke Sameria, nọ na-ekwusa Kraịst ha.
8:6 Na ìgwè mmadụ na-ege ya ntị na ji otu aka ihe ndị ahụ nke nọ na-ndị Filip na, na ha na-ekiri ihe ịrịba ama nke ọ na-emezu.
8:7 N'ihi na ọtụtụ n'ime ha nwere mọ nādighi ọcha, na, na-eti mkpu n'oké olu, ndị a hapụrụ ha.
8:8 Ọtụtụ n'ime ndị paralytics na ndi-ngwurọ gwọrọ.
8:9 Ya mere, e oké ọṅụ ke obio. Ugbu a, e nwere otu nwoke aha ya bụ Simon, onye n'oge gara aga na-ama onye dibịa afa na na obodo, duhieruru ndị Sameria, azọrọ na ya na-onye ukwu.
8:10 Na ndị niile na ndị ga-ege ntị, malite n'onye kasị nta ruo n'onye kasị ukwuu, ọ na-ekwu: "Lee ike nke Chineke, nke a na-akpọ oké. "
8:11 Ha enyịn ya n'ihi na, ogologo oge, ọ ghọgburu ha ya anwansi.
8:12 Ma n'ezie, ozugbo ha kwere Filip, bụ onye na-ezisa ozi ọma alaeze Chineke, ma ndị ikom ma ndị inyom ndị e mere baptizim n'aha nke Jesus Christ.
8:13 Mgbe Saịmọn na-kweere na, mgbe ọ e mere baptizim, ọ agbasoghị Philip. Ma ugbu a,, ịhụ na-kasị ukwuu ịrịba ama na ọrụ ebube a na-luworo, o jukwara ya anya na stupefied.
8:14 Ugbu a, mgbe ndịozi bụ ndị na Jerusalem nuru na Sameria natara okwu Chineke, ha zigara ha Pita na Jọn ha.
8:15 Ma mgbe ha rutere, ha kpere ekpere bayere ha, ka ha wee nweta Mmụọ Nsọ.
8:16 N'ihi na ọ erubeghị ka ọ bụla n'etiti ha, ebe ọ bụ na ha na-baptizim n'aha Onyenwe anyị Jizọs.
8:17 Mgbe ahụ, ha bikwasịrị ha aka n'isi, ha we nara Mo Nso.
8:18 Ma mgbe Simon hụrụ na, site na imposition nke aka nke onyenchịkwa, Mmụọ Nsọ e nyere, o nyere ha ego,
8:19 si, "Nye a ike m, nke mere na na onye ọ bụla m ga-ebikwasị aka m n'isi, o nwere ike na-enweta na Mmụọ Nsọ. "Ma Pita sịrị ya:
8:20 "Ka gị na ego na na na na adiana ke adiana, n'ihi na i chere na a onyinye Chineke nwere ike nwere ego.
8:21 E nweghị akụkụ ma ọ bụ ebe ị na okwu a. N'ihi na obi gị na-adịghị na ha ziri ezi n'anya Chineke.
8:22 Ya mere, echegharị a, ọjọ unu, na-arịọ Chineke, nke mere na ikekwe a plan obi gị nwere ike na-agbaghara gị.
8:23 N'ihi na m aghọta na ị na-ke ńsí nke ilu na na nkekọ nke ajọ omume. "
8:24 Saịmọn zara, sị, "Na-ekpe ekpere ka m na Jehova, nke mere na ihe ọ bụla nke ihe unu kwuru nwere ike ime m. "
8:25 ma n'ezie,, mgbe àmà na-ekwu okwu Okwu nke Chineke, ha we laghachi na Jerusalem, na ha ọkọkwọrọ ọtụtụ n'ógbè ndị Sameria.
8:26 Ugbu a ihe mmụọ ozi Jehova gwara Philip, si, "Bilie gaa n'ebe ndịda, ka ụzọ nke gesi Jerusalem n'ime Geza, ebe a desert. "
8:27 Na ebili, O wee. Ma, le, nwoke Etiopia, a eunuch, ike n'okpuru Candace, ndị eze nwanyị ndị Etiopia, ahụ na-elekọta ihe niile akụ ya, rutere n'ebe Jerusalem ife ofufe.
8:28 Na mgbe na-alọta, ọ nọ ọdụ ụgbọ ịnyịnya ya ma na-agụ site na Aịzaya onye amụma.
8:29 Mmụọ + wee si Filip, "Nso ma sonyere onwe gị n'ụgbọ ịnyịnya a."
8:30 na Philip, mee ọsọ ọsọ, nụrụ ya na-agụ site na Aịzaya onye amụma, o wee sị, "Ì chere na ị na-aghọta ihe ị na-agụ?"
8:31 O wee sị, "Ma, olee otú ike m, ma onye ga-kpugheere m ya?"Ma ọ jụrụ Filip ịrị elu ya na ya nọdu.
8:32 Ugbu a n'ebe na Akwụkwọ Nsọ nke ọ na-agụ bụ nke a: "Dị ka atụrụ e mere ka o ndiwot. Na dị ka a atụrụ nkịtị tupu nākpacha ya aji, ka o meghere ya ọnụ.
8:33 Ọ tachiri obi ya ikpe, ha na ịdị umeala n'obi. Ònye ọgbọ ya ga-akọwa otú ndụ ya e wepụwo ụwa?"
8:34 Mgbe ahụ eunuch zara Philip, si: "Ana m arịọ gị, banyere onye bụ onye amụma si a? banyere onwe ya, ma ọ bụ banyere onye ọzọ?"
8:35 mgbe Philip, asaghe ọnụ ya na-amalite site nke a Akwụkwọ Nsọ, ọkọkwọrọ Jesus ya.
8:36 Ma mgbe ha na-aga n'okporo ụzọ ahụ, ha rutere na ụfọdụ isi iyi mmiri. Ọnaozi ahụ wee sị: "E nwere mmiri. Gịnị ga-gbochie m baptism?"
8:37 Mgbe Filip si, "Ọ bụrụ na ị kwere site n'obi gị dum, ọ na-kwere. "O gwara ha, sị, "M kwere ka Ọkpara Chineke na-Jesus Christ."
8:38 Na o nyere iwu ka ụgbọ ịnyịnya ahụ guzo. Ma ma Filip ma ọnaozi ahụ rịdata n'ime mmiri. Ọ enye baptism.
8:39 Ma mgbe ha rigoro si na mmiri, Mọ nke Jehova we were Filip pụọ, ọnaozi ahụ ahụghịkwa ya ọzọ. O wee gawa, ya, na-aṅụrị ọṅụ.
8:40 Ma Filip hụrụ na Azotus. Na aka iso on, ọ ọkọkwọrọ obodo nile, ruo mgbe ọ bịarutere na Caesarea.